Nea Onyankopɔn De Ahyɛ Nnipa Bɔ
KENKAN WƆ Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bolivian Sign Language Boulou Bété Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chiga Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Emberá (Catío) English Esan Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon French Futuna (East) Ga Galician German Gitonga Gokana Greek Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Havu Haya Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Isoko Italian Italian Sign Language Ivorian Sign Language Japanese Javanese Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabuverdianu Kachin Kalenjin Kannada Kanyok Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Khakass Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikongo ya Leta Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Korean Sign Language Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Laotian Lari Lega Lendu Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Lovari Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Makhuwa-Meetto Makhuwa-Shirima Makonde Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Mari Mashi Mauritian Creole Maya Mazahua Mbunda Mende Meru Mexican Sign Language Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Myanmar Sign Language Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Nepali Sign Language Ngabere Ngangela Ngbandi (Northern) Nias Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga (Mozambique) Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Phimbi Pidgin (Cameroon) Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi (Shahmukhi) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotongan Romanian Romanian Sign Language Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Sepulana Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Tewe Thai Thai Sign Language Tigrinya Tiv Tlapanec Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Vietnamese Sign Language Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zambian Sign Language Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
1. Adɛn nti na Onyankopɔn bɔɔ yɛn baa asase so?
ADE a Onyankopɔn abɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ ama nnipa no, ɛso bi mmae da. Ɔbarima ne ɔbea a Onyankopɔn dii kan bɔɔ wɔn ne Adam ne Hawa, na ɔde wɔn too turo fɛfɛɛfɛ mu. Ná ɔpɛ sɛ wɔwo mma na wɔma asase mũ no nyinaa yɛ Paradise, na wɔhwɛ mmoa no so.​—Genesis 1:28; 2:8, 9, 15; hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 6.
2. (a) Dɛn na ɛma yehu sɛ nea Onyankopɔn abɔ ne tirim no, ɔbɛyɛ? (b) Dɛn na Bible ka sɛ atreneefo benya daakye?
2 Wugye di sɛ daakye yebenya Paradise atena? Nea Yehowa reka akyerɛ yɛn ni: “Mabɔ me tirim, na mɛyɛ.” (Yesaia 46:9-11; 55:11) Ɛyɛ nokware, nea Yehowa abɔ ne tirim no ɔbɛyɛ, na biribiara nni hɔ a ebetumi asiw no kwan. Yehowa se biribi nti na ɔbɔɔ asase. “Wammɔ no hunu.” (Yesaia 45:18) Ɔpɛ sɛ nnipa tena asase so baabiara. Ɛnde, nnipa bɛn na Onyankopɔn pɛ sɛ wɔtena asase so? Wɔbɛtena so akosi da bɛn? Bible ka sɛ: “Treneefo [anaa wɔn a wɔyɛ papa no] benya asase no adi, na wɔatena so daapem.”​—Dwom 37:29; Adiyisɛm 21:3, 4.
3. Wohwɛ sɛnea yare ne owu redi nnipa nya no a, asɛm bɛn na ebia wubebisa?
3 Nanso nnɛ, yare ne owu redi nnipa nya. Afei nso, wokɔ aman pii so a, nnipa di ako kunkum wɔn ho. Yebetumi aka sɛ ɛnyɛ sɛɛ na Onyankopɔn pɛ sɛ asetena yɛ. Ɛnde dɛn na akɔfa ɔhaw yi nyinaa aba? Bible no nkutoo na ebetumi akyerɛ.
4, 5. (a) Hena na ɔfaa ɔwɔ so ne Hawa kasae wɔ Eden turo mu hɔ? (b) Ɛyɛ dɛn na onipa pa tumi sesa bɛyɛ ɔkorɔmfo?
4 Bible ma yehu sɛ Onyankopɔn wɔ ɔtamfo bi a “wɔfrɛ no Ɔbonsam ne Satan.” Satan faa ɔwɔ so kasa kyerɛɛ Hawa wɔ Eden turom. (Adiyisɛm 12:9; Genesis 3:1) Ɔma ɛyɛɛ te sɛ nea ɔwɔ no na ɔrekasa.​—Hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 7.
5 Onyankopɔn na ɔmaa no bɛyɛɛ Satan Ɔbonsam anaa? Dabi! Bere a Onyankopɔn siesiee asase de Adam ne Hawa bɛtenaa so no, na ɔyɛ ɔbɔfo wɔ soro. Akyiri yi na ɔbɛyɛɛ Ɔbonsam. (Hiob 38:4, 7) Ɛbaa no sɛn? Sɛnea onipa pa tumi sesa bɛyɛ ɔkorɔmfo no, saa ara na ɛyɛe. Ne maame woo no no, na ɔnyɛ ɔkorɔmfo. Ɔno ankasa n’akɔnnɔ na ɛdaadaa no ma n’adwene kɔɔ biribi a ɛnyɛ ne dea so. Ɔredwennwen ho nyinaa, na akɔnnɔ no mu reyɛ den. Enti sɛ onya kwan ara pɛ, na wawia dekode no. Ɛba saa a, na ɔno ara na wayɛ ne ho ɔkorɔmfo.​—Kenkan Yakobo 1:13-15; hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 8.
6. Ɛyɛɛ dɛn na ɔbɔfo bi bɛyɛɛ Onyankopɔn tamfo?
6 Biribi saa na ɔbɔfo no yɛe. Bere a Yehowa bɔɔ Adam ne Hawa no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnwo nhyɛ “asase so mã.” (Genesis 1:27, 28) Ebia ɔbɔfo yi kaa wɔ ne tirim sɛ, ‘Minyae a anka me na nnipa yi nyinaa bɛsom me, na ɛnyɛ Yehowa.’ Enti na n’ani bere Yehowa, na ogu so redwen ho nyinaa na anibere no reyɛ kɛse. Ewiee ase no, ɔkɔdaadaa Hawa. (Kenkan Genesis 3:1-5.) Eyi ma ɔbɛyɛɛ Satan Ɔbonsam ne Onyankopɔn tamfo.
7. (a) Ɛyɛɛ dɛn na Adam ne Hawa wui? (b) Adɛn nti na yenyinyin na yewuwu?
7 Adam ne Hawa yɛɛ Onyankopɔn so asoɔden, na wodii aduaba no. (Genesis 2:17; 3:6) Wɔyɛɛ bɔne tiaa Yehowa. Ewiee ase no, wɔde wɔn nkwa twaa so sɛnea Yehowa kae no. (Genesis 3:17-19) Mma a Adam ne Hawa woo wɔn no bɛyɛɛ abɔnefo, enti wɔn nso wuwu. (Kenkan Romafo 5:12.) Wo deɛ ma yɛnyɛ ntotoho bi na ɛbɛboa ama woahu nea ɛyɛe a Adam ne Hawa mma bɛyɛɛ abɔnefo. Fa no sɛ woreto paanoo wɔ kyɛnsee a amoa mu. Paanoo biara a wobɛto wɔ saa kyɛnsee no mu no, ɛbɛmoa. Bere a Adam yɛɛ Onyankopɔn so asoɔden no, ɔbɛyɛɛ ɔbɔnefo te sɛ kyɛnsee a amoa. Yɛn nyinaa fi ne mu, enti ɔde bɔne awo yɛn, kyerɛ sɛ, yɛn nso “yɛamoa.” Esiane sɛ yɛn nyinaa yɛ abɔnefo nti, yenyinyin na yewuwu.​—Romafo 3:23; hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 9.
8, 9. (a) Adwene bɛn na na Satan pɛ sɛ Adam ne Hawa nya? (b) Adɛn nti na Yehowa ankum atuatewfo no amonom hɔ ara?
8 Satan sɔre tiaa Yehowa na ɔmaa Adam ne Hawa yɛɛ Onyankopɔn so asoɔden. Ná ɔpɛ sɛ Adam ne Hawa gye di sɛ Yehowa yɛ ɔtorofo, odi nnipa so atirimɔden so, na ɔmpɛ sɛ esi wɔn yiye. Nea na Satan reka ara ne sɛ, nnipa nhia Onyankopɔn wɔ wɔn abrabɔ mu. Mmom, Adam ne Hawa ankasa na ɛsɛ sɛ wɔkyerɛ nea ɛyɛ papa ne bɔne, na ɛnyɛ Onyankopɔn. Ɛnde dɛn na Yehowa bɛyɛ? Ná anka obetumi akum asɔretiafo no ama atuatew no to atwa. Sɛ ɔyɛɛ saa a, anka ɛbɛma yɛahu sɛ Satan yɛ ɔtorofo anaa? Dabi, yɛrenhu.
9 Ɛno nti, Yehowa ankum atuatewfo no amonom hɔ ara. Mmom, ɔmaa nnipa kwan sɛ wonni wɔn ho so na yɛnhwɛ nea ebesi. Eyi bɛma yɛahu pefee sɛ Satan yɛ ɔtorofo na Yehowa na onim nea eye ma nnipa. Yebesua nea enti a Yehowa maa kwan sɛ nnipa nni wɔn ho so no ho ade akɔ akyiri wɔ Ti 11 mu. Nea Adam ne Hawa yɛe no, wuhu no sɛn? Wohwɛ a, na ɛyɛ papa sɛ wotie Satan na wɔyɛ Onyankopɔn so asoɔden? Yehowa maa Adam ne Hawa biribiara a wohia. Ná wɔyɛ pɛ; bɔne biara nni wɔn ho. Baabi a wɔte no nso yɛ kama, na na adwuma a wɔyɛ nso ma wɔn koma tɔ wɔn yam. Nanso Satan deɛ, na ɔnyɛɛ hwee mmaa wɔn. Enti ɛyɛ wo a, anka dɛn na wobɛyɛ?
10. Asɛnhia bɛn na ɛda yɛn nyinaa anim?
10 Ɛnnɛ, asɛm koro no ara na ɛda yɛn anim. Ɛyɛ owu ne nkwa asɛm. Yɛpɛ a, yebetie Onyankopɔn de akyerɛ sɛ yɛpɛ sɛ odi yɛn so na ama Satan ayɛ ɔtorofo. Sɛ Satan tumidi nso na yɛpɛ a, obiara nsiw yɛn kwan. (Dwom 73:28; kenkan Mmebusɛm 27:11.) Nnipa a wɔwɔ wiase no mu kakraa bi na wotie Onyankopɔn. Nea ɛte ne sɛ, ɛnyɛ Onyankopɔn na odi wiase yi so. Sɛ ɛnyɛ ɔno a, ɛnde hena?
HENA NA ODI WIASE SO?
Sɛ wiase ahenni nyinaa nyɛ Satan de a, anka obetumi aka sɛ ɔde bɛma Yesu?
11, 12. (a) Yɛhwɛ nea Satan kae sɛ ɔde bɛma Yesu no a, dɛn na yebetumi aka? (b) Bible mu asɛm bɛn na ɛma yehu sɛ Satan na odi wiase so?
11 Ná Yesu nim nea odi wiase yi so. Bere bi Satan de “wiase ahenni nyinaa ne emu anuonyam” kyerɛɛ Yesu, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wobɔ wo mu ase som me [anaa wokotow me] a, mede eyinom nyinaa bɛma wo.” (Mateo 4:8, 9; Luka 4:5, 6) Bisa wo ho sɛ, ‘Ahenni no nyɛ Satan dea a, anka obetumi aka sɛ ɔde bɛma Yesu?’ Dabi. Wiase ahenni nyinaa yɛ Satan dea.
12 Ebia wubesusuw sɛ: ‘Sɛ Yehowa ne ade nyinaa so Tumfoɔ a ɔbɔɔ biribiara a, ɛyɛɛ dɛn na wiase ahenni bɛyɛɛ Satan dea?’ (Adiyisɛm 4:11) Ampa, Yehowa na ɔbɔɔ biribiara, nanso Yesu frɛɛ Satan “wiase sodifo.” (Yohane 12:31; 14:30; 16:11) Ɔsomafo Paulo nso frɛɛ Satan Ɔbonsam “wiase yi nyame.” (2 Korintofo 4:3, 4) Ɛnna ɔsomafo Yohane nso kyerɛwee sɛ, “wiase nyinaa da ɔbɔnefo no tumi mu.”​—1 Yohane 5:19.
ƆKWAN BƐN NA SATAN WIASE NO BƐFA SO ASƐE?
13. Adɛn nti na yehia wiase foforo?
13 Wiase yi mu tena ayɛ hu paa. Baabi a wobɛfa biara, ɛnyɛ akokoakoko a na ɛyɛ kɛtɛasehyɛ, ɛnyɛ nyaatwom a na ɛyɛ basabasayɛ. Nnipa ayɛ nea wobetumi biara nanso wontumi nyii ɔhaw no mfii hɔ. Nanso ɛrenkyɛ koraa, Onyankopɔn de Harmagedon ko bɛsɛe wiase bɔne yi, na ɔde wiase foforo asi ananmu. Saa wiase no mu deɛ, adetrenee nkutoo na ɛbɛkɔ so.​—Adiyisɛm 16:14-16; hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 10.
14. Hena na Onyankopɔn ayi no sɛ ɔnyɛ n’Ahenni no so hene? Yesu nnya mmaa asase so no, dɛn na Bible ka faa ne ho?
14 Yehowa wɔ Ahenni anaa aban bi wɔ soro, na wayi Yesu Kristo sɛ ɔnyɛ Ahenni no so hene. Yesu nnya mmaa asase so no, na Bible aka dedaadaw sɛ ɔbɛyɛ “Asomdwoe Hene” na n’ahenni to rentwa da. (Yesaia 9:6, 7) Yesu kyerɛɛ n’asuafo sɛ wɔmmɔ mpae sɛ: “W’ahenni mmra. W’apɛde nyɛ hɔ wɔ asase so te sɛ ɔsoro.” (Mateo 6:10) Yedu Ti 8 a, yebehu nea Onyankopɔn Ahenni bɛyɛ de ayi wiase tumidi afi hɔ. (Kenkan Daniel 2:44.) Afei Onyankopɔn Ahenni bɛyɛ asase nyinaa paradise fɛfɛɛfɛ.​—Hwɛ Nsɛm Bi Mu Nkyerɛkyerɛmu 11.
WIASE FOFORO NO ABƐN!
15. Dɛn ne “asase foforo” no?
15 Bible hyɛ bɔ sɛ: “Yɛretwɛn ɔsoro foforo ne asase foforo, na eyi mu na trenee bɛtena.” (2 Petro 3:13; Yesaia 65:17) Sɛ Bible ka “asase” a, ɛtɔ da a ɛkyerɛ nnipa a wɔte asase so. (Yeremia 22:29) Enti “asase foforo” a trenee bɛtena mu a Bible aka ho asɛm no bɛyɛ nnipa a wotie Onyankopɔn na wonya ne nhyira.
16. Akyɛde nwonwaso bɛn na Onyankopɔn de bɛma nnipa a wɔbɛtena wiase foforo no mu? Sɛ yɛpɛ daa nkwa a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ?
16 Yesu kae sɛ wɔn a wɔbɛkɔ Onyankopɔn wiase foforo mu no benya “daa nkwa.” (Marko 10:30) Sɛ yɛpɛ daa nkwa a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ? Yɛsrɛ wo kenkan Yohane 3:16 ne 17:3 na wubenya ho mmuae. Afei ma yɛnhwɛ sɛnea Bible ka sɛ asetena bɛyɛ wɔ Paradise asase so.
17, 18. Dɛn na ɛma yehu sɛ asomdwoe bɛba asase so baabiara na biribiara renhunahuna yɛn?
17 Atirimɔdensɛm, akokoakoko, nsɛmmɔnedi, ne awudisɛm befi hɔ. Abɔnefo deɛ, baako mpo renka wɔ asase so. (Dwom 37:10, 11) Onyankopɔn bɛma ‘akodi agyae akosi asase ano.’ (Dwom 46:9; Yesaia 2:4) Nnipa a wɔdɔ Onyankopɔn na wotie no nkutoo na wɔbɛhyɛ asase so ma. Asomdwoe bɛtena hɔ daa.—Dwom 72:7.
18 Yehowa nkurɔfo asom bedwo wɔn. Tete mmere mu no, sɛ Israelfo tie Onyankopɔn a, na wɔn asom dwo wɔn efisɛ na Onyankopɔn bɔ wɔn ho ban. (Leviticus 25:18, 19) Sɛ asase dan Paradise a, biribiara nni hɔ a ebehunahuna yɛn. Yɛn ho bedwo yɛn afebɔɔ!​—Kenkan Yesaia 32:18; Mika 4:4.
19. Wiase foforo a Onyankopɔn de ahyɛ yɛn bɔ no, adɛn nti na yebetumi agye adi sɛ aduan bebu so wɔ hɔ?
19 Aduan bebu so. “Asase no so nnɔbae bɛdɔɔso; ebebu so akodu mmepɔw atifi.” (Dwom 72:16) Yehowa “yɛn Nyankopɔn, behyira yɛn.”​—Dwom 67:6.
20. Dɛn na ɛma yehu sɛ asase nyinaa bɛyɛ Paradise?
20 Asase mũ no nyinaa bɛyɛ Paradise. Nnipa benya adan pa atena mu, na wɔaduadua nnuaba pii. (Kenkan Yesaia 65:21-24; Adiyisɛm 11:18.) Asase so bɛyɛ fɛfɛɛfɛ sɛnea na Eden turo no te no. Nea yehia biara, Yehowa de bɛma yɛn. Bible ka Onyankopɔn ho asɛm sɛ: “Wubue wo nsam na woma ateasefo nyinaa nya nea wɔpɛ di mee.”​—Dwom 145:16.
21. Yɛyɛ dɛn hu sɛ nnipa ne mmoa bɛtena asomdwoe mu?
21 Nnipa ne mmoa bɛtena asomdwoe mu. Mmoa renyɛ nnipa bɔne bio. Mmoa a ɛnnɛ wɔn ho yɛ hu mpo, mmofra nketewaa betumi ne wɔn adi agorɔ.—Kenkan Yesaia 11:6-9; 65:25.
22. Dɛn na Yesu bɛyɛ ama ayarefo?
22 Obiara renyare. Yesu wɔ asase so no, ɔsaa nnipa bebree yare. (Mateo 9:35; Marko 1:40-42; Yohane 5:5-9) Nanso sɛ Onyankopɔn Ahenni no nya ba asase so a, saa bere no deɛ ɛbɛkyɛn; Ɔhene Yesu bɛsa obi biara yare. Obiara renka sɛ: “Meyare.”​—Yesaia 33:24; 35:5, 6.
23. Dɛn na Onyankopɔn bɛyɛ ama wɔn a wɔawuwu?
23 Wobenyan awufo. Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ obenyan awufo mpempem pii. “Bere bi bɛba a wɔn a wɔteɛ ne wɔn a wɔnteɛ bɛsɔre afi awufo mu.” Kenkan Yohane 5:28, 29; Asomafo Nnwuma 24:15.
24. Paradise asetena a yɛaka ho asɛm no, ɛka wo sɛn?
24 Yɛn nyinaa, nneɛma mmienu na ɛda yɛn anim. Yebetumi ayere yɛn ho asua Yehowa ho ade asom no anaasɛ yɛbɛyɛ nea yɛpɛ. Nanso sɛ yɛde si yɛn ani so sɛ yɛbɛsom Yehowa a, anigye na ɛda hɔ retwɛn yɛn. Yesu kaa ho asɛm kyerɛɛ ɔbarima bi. Ɔbarima no srɛɛ sɛ owu a, Yesu nkae no. Ɛnna Yesu hyɛɛ no bɔ sɛ: “Wobɛka me ho wɔ Paradise.” (Luka 23:43) Afei, ma yɛnhwɛ nea Bible ka fa Yesu Kristo ho, ne nea ɔbɛyɛ ama Onyankopɔn bɔhyɛ nwonwaso no aba mu.
NOKWASƐM 1: BIRIBI NTI NA YEHOWA BƆƆ NNIPA
“Treneefo benya asase no adi, na wɔatena so daapem.”​—Dwom 37:29
Adɛn nti na Onyankopɔn bɔɔ nnipa?
Ná Onyankopɔn pɛ sɛ nnipa yɛ asase yi Paradise na wɔhwɛ mmoa a wɔwɔ so no so.
Nea Onyankopɔn abɔ ne tirim no, ɔbɛyɛ; biribiara rentumi nsiw no kwan.
NOKWASƐM 2: NEA AMA ASETENA AYƐ DEN
“Wiase nyinaa da ɔbɔnefo no tumi mu.”​—1 Yohane 5:19
Yesu frɛɛ Satan wiase sodifo.
Satan maa n’ani beree biribi a ɛnyɛ ne dea.
Satan daadaa Hawa, na Adam ne Hawa yɛɛ Onyankopɔn so asoɔden; akyiri yi wɔn baanu nyinaa wui.
Romafo 3:23; 5:12
Bɔne a yenya fii Adam hɔ nti na yewu.
2 Korintofo 4:3, 4
Satan daadaa nkurɔfo.
NOKWASƐM 3: ONYANKOPƆN AHENNI BEYI ƆHAW NO AFI HƆ
“W’ahenni mmra. W’apɛde nyɛ hɔ wɔ asase so.”​—Mateo 6:10
Dɛn na Yehowa bɛyɛ?
Onyankopɔn ahenni bɛba abeyi wiase tumidi nyinaa afi hɔ.
Onyankopɔn ko a yɛfrɛ no Harma- gedon no bɛsɛe wiase bɔne yi.
Yehowa wɔ aban bi wɔ soro. Wayi Yesu sɛ ɔnyɛ so hene, na obedi asase yi so.
NOKWASƐM 4: ONYANKOPƆN AHENNI BƐMA ASASE YI AYƐ PARADISE
“Wubue wo nsam na woma ateasefo nyinaa nya nea wɔpɛ di mee.”​—Dwom 145:16
Dɛn na Onyankopɔn Ahenni bɛyɛ ama yɛn?
Akokoakoko, nsɛmmɔnedi, ne awudisɛm befi hɔ.
Wiase foforo no mu no, obiara benya dan pa atena mu, aduadua nneɛma, na wɔn asom adwo wɔn.
Aduan bebu so.
Nnipa ne mmoa bɛtena asomdwoe mu.
Yesaia 33:24; Asomafo Nnwuma 24:15
Obiara renyare, na awufo bɛsan asɔre.
Nea Onyankopɔn Ahenni Bɛyɛ
Share Share Adɛn Nti na Onyankopɔn Bɔɔ Yɛn Baa Asase So?
bhs ti 3 kr. 29-39